फोटो फिचर – Page3– shubhabihani
Home / फोटो फिचर (page 3)
चियापानमा पुगेका देउवालाई ओलीले सोधे- समयमै निर्वाचन हुन्छ त ? निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ’: ( देउवा फोटो फिचर )
२९ असोज, काठमाडौं । आज धुम्बाराहीको शंखपार्कमा नेकपा एमालेले गरेको चियापान कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच निर्वाचनबारे समान्य बहस भयो । पत्रकारहरुले दुबै नेतासँगै रहेका बेला प्रश्न तेर्स्याएपछि दुबै नेताले मुख खोले ।
‘निर्वाचन समयमा हुन्छ त ?’ पत्रकारको प्रश्नलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवातिर देखाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, ‘‘निर्वाचन त गर्नैपर्छ नि होइन र, सरकारको के छ धारणा र ? ’’
छेउमै बसेका ओली र अन्य नेतालाई पनि साक्षी राखेर काँग्रेस सभापति देउवाले पनि रमाइलो शैलीमा उत्तर दिए, ‘‘निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ । गर्ने, गर्ने गर्ने ।’’
त्यसपछि नेता र पत्रकारबीच हाँसोको फोहोरा छुट्यो । राजनीतिक सन्देश मिल्ने स्वष्ट जवाफ नआएपछि पत्रकारले पटक÷पटक संविधान संशोधन र निर्वाचनबारे कोट्याएपछि दुई शीर्ष नेताले मुख खोले । सभापति देउवाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव आवश्यक छैन भनेर एमालेले नभनेको बरु त्यसको औचित्य खोजिरहेको बताउँदै सहमति गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एमालेले विजयादशमी, दीपावली, नेपाल संवत् र छठ लगायतका पर्वका अवसरमा भएको चियापान कार्यक्रममा नेताबीच शुभकामना आदानप्रदानसहित सामान्य घोचपेच पनि चल्यो ।
‘‘शुभकामना आदानप्रदानको समयमा राजनीतिक पक्ष विपक्षको भाषा बोल्न चाहान्न, सबै दल र पक्षलाई स्वागत भन्न चाहन्छु’’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने ।
‘काँग्रेसलाई सुतेको बाघजस्तो दल भन्नुहुन्थ्यो त, नजिकै बस्दा डर लाग्या छैन’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीको छोटो जवाफ थियो, ‘‘जगाइराख्या छु ।’’
बाघलाई जगाउनु पनि खतरा होइन र ? भन्ने प्रतिप्रश्नमा ओलीले भने, ‘‘ काँग्रेसलाई अरु सानोतिनो किन भन्ने भनेर त्यसो भनेको नि ।’’
ब्रिक्स सम्मेलनका लागि भारतमा रहेकाले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने चियापानमा उपस्थित भएनन्।
चियापानमा सभामुख ओनसरी घर्ती, मन्त्रीगण, काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मधेसी जनाधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तराई– मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनानीलगायत नेता सहभागी थिए ।
यसअघि पुरानो पार्टी कार्यालयको साँघुरो परिसरमा भन्दा शङ्खपार्कको फराकिलो वातावरणको चियापान थप व्यवस्थित देखिएको थियो । दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म हुने चियापान कार्यक्रमको मूलढोकामा विभिन्न राष्ट्रिय भेशभूषामा सजिएका कलाकारले झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए भने पाहुनालाई पार्टीका अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव प्रदीप ज्ञवालीलगायतले स्वागत गरेका थिए।
नेपालको हङकङमाथि रोमाञ्चक जित (फोटो फिचर )
आश्विन २७, २०७३- नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले आईसीसी महिला विश्वकप २०१७ को एसियाली छनोटमा विहीबार आयोजक हङकङमाथि ६ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ ।
कउलुन क्रिकेट क्लबमा टस जितेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेट गुमाएर ७५ रनको स्कोर बनायो । घरेलु टिमलाई १७.४ ओभरमा ६९ रनमा अलआउट गर्दै नेपाली महिला टिमले एसियाली छनोटमा लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको हो । डबल लिगको आधारमा आयोजित छनोटमा यसअघि नेपालले चीनलाई मंगलबार २० रनले हराएको थियो ।
नेपालले सुरुका दुई खेलमा भने हङकङसँग ६ विकेट र थाइल्यान्डसँग ३ विकेटको हार बेहोरेको थियो । मंगलबारकै अर्को खेलमा चीनले शीर्षस्थानको थाल्यान्डलाई तीन विकेटले पराजित गरेपछि छनोट प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक बनेको छ । एसियामा शीर्षस्थानमा रहने टिमले विश्वव्यापी छनोटमा अवसर पाउनेछ । लगातार दोस्रो जितसँगै नेपालले पनि शीर्षस्थानमा रहदै ‘ग्लोबल क्वालिफाइर’ खेल्ने संभावना कायमै राख्यो ।
एसियाली छनोटमा तीन जित हात पारेको थाइल्यान्ड ६ अंकसहित शीर्षस्थानमा छ । समान ४–४ अंक जोडेपनि राम्रो नेटरनरेटको आधारमा नेपालभन्दा अगाडि रहेको हङकङ दोस्रो स्थानमा यथावत् रह्यो । चौथो खेलमा आएर पहिलो जित हात पारेको चीन २ अंकसहित अन्तिम स्थानमा छ । अब नेपालले शुक्रबार हङकङ क्रिकेट क्लबमा थाइल्यान्ड र मिसन रोड मैदान, मोङ कोकमा शनिबार चीनसँग खेल्नेछ ।
‘प्राविधक रुपमा र खेलाडीको व्यक्तिगत कौशलको आधारमा सबभन्दा बलियो टिम नेपाल हो,’ नेपाली महिला टिमका मुख्य प्रशिक्षक राजु बस्न्यातले भने, ‘हामीले हङकङसँग हात पारेको जित र चीनले थाइल्यान्डलाई पराजित गरेपछि एसियाली छनोटमा शीर्षस्थानको होड खुला भएको छ । लगातार दुई जितसँगै टिममा आत्मविश्वासी बन्दै गएको छ । अब ठूलो अन्तरले दुई खेल जित्दै ग्लोबल क्वालिफाइरमा पुग्न चाहन्छौं ।’
करुणाको अलराउन्ड प्रदर्शन
करुणा भण्डारीले अलराउन्ड प्रदर्शन गरेपछि हङकङविरुद्ध नेपालको जित संभव भएको हो । आठौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेकी उनले नटआउट १९ रनको योगदान गरिन् । उनले २७ बल खेल्दै दुई चौका प्रहार गरिन् । अघिल्लो खेलमा बलिङ गर्ने अवसर नपाएकी उनले विहीबार चार ओभरको स्पेलमा १७ रन दिएर महत्वपूर्ण तीन विकेट लिइन् । उनी वुमेन अफ दि म्याच पनि घोषित् भइन् ।
‘हामीले ब्याटिङमा राम्रो गर्न सकेनौं तर हामीलाई आफ्नो बलिङ राम्रो छ भन्ने थाहा थियो । सबैले राम्रो बलिङ गरेपछि जित संभव भयो । यसले अझ राम्रो खेल्न उत्साहित बनाएको छ, आत्मविश्वास बढाएको छ,’ करिअरकै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेकी करुणाले भनिन्, ‘सबैले थोरै–थोरै रन जोडेपनि राम्रै स्कोर बन्छ, जुन हङकङविरुद्ध देखियो । अब अर्को खेलमा पनि मिहिनेत गरे राम्रो प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्नेछु ।’
नेपालले नौ रन जोडासम्म सीता रानामगर, काजोल श्रेष्ठ र अघिल्ला खेलमा भरपर्दा देखिएकी निर्मला शाहीलाई गुमाइसकेको थियो । इन्दु वर्मा (१५ रन) र ज्योती पाण्डे (११ रन) ले चौथो विकेटको लागि २० रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई २०–४ को संघर्षरत् अवस्थामा पुऱ्याएका थिए । नेरी थापा (१० रन) र सरिता मगर (५ रन) रनआउट भएपछि नेपाल ४७–६ को स्थितिमा पुगेको थियो ।
कप्तान रुबिना क्षेत्री पनि ४ रन बनाएर पवेलियन फर्केकली थिइन् । हङकङका चान का मानले तीन र किनु गिलले दुई विकेट लिएर नेपाललाई सामन्य स्कोरमा रोकेका थिए ।
रुबिनाले नेचुरल यिपलाई १ रनमा बोल्ड गरेपछि तेस्रो ओभरमा हङकङ ९–१ को अवस्थामा पुगेको थियो । तर, निर्मलाको बलमा विकेटकिपर ज्योतीले केरी चानलाई १८ रनमा आउट गरेपछि हङकङले सातौं ओभरमा दोस्रो विकेट गुमाएको थियो । त्यसबेला ३३ रन जोडेको हङकङ बलियो स्थितिमा थियो । त्यसपछि भने उसले उस्तै लय कायम राख्न सकेन । नेपाली बलिङसामु हङकङका ब्याटसउमन क्रिजमा टिक्न सकेनन् र उसले ४४ रन जोडासम्म ६ विकेट गुमायो ।
१३ रन बनाएर इनिङ्स सम्हाल्न प्रयासरत कप्तान मरिका हिललाई सरिता मगरले निर्मलाको सहयोगमा पिचबाट हटाइन् । अन्त्यतिर ६ रन जोडेकी चान का मानलाई सवनम राईले एलबीडब्लु धरापमा पारेपछि नेपालले १४ बल बाकी छंदै हङकङलाई ६९ रनमा सीमित पार्दै रोमाञ्चक जित हात पारेको हो । सीताले दुई तथा रुबिना, सबनम र निर्मलाले एक–एक विकेट हात पारे ।
सबै तस्बिरहरु: ओमप्रसाद गुरुङ
बडा दसैँ को छुट्टी मा चन्द्रागिरि मा आन्तरिक पर्यटक को भिड ( फोटो फिचर )
२७ असोज, काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरी पुगेर २७ हजारले दशैंको विदा मनाएका छन् । केही समयअघि देखि खुलेको केबलकार चढेर झण्डै २७ हजारभन्दा बढीले चन्द्रागिरीको यात्रा गरेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले जनाएको छ ।
चन्द्रागिरीमा रहेको भालेश्वर महादेव मन्दिर सबैभन्दा बढी आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । सँगै चन्द्रागिरीको प्राकृतिक सौन्दर्यता, ऐतिहासिकता र त्यहाबाट दखिने काठममाडौं उपत्यका तथा चित्लाङ गाउँको मनोरम दृश्यावलकेनका लागि दशैंको विदा मनाउनेको भीड लागेको हो ।
चन्द्रागिरीमा अब काठमाडौंमा नयाँ पर्यटकीय गन्तब्य बनको छ । झन दशैंमा लागेको भीडले चन्द्रागिरी अब थप चम्किने संकेत गरेको छ । चन्द्रागिरी पुग्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हिल्सकी सेल्स एण्ड मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ इन्दिरा पौडेलले जानकारी दिइन् ।
चन्द्रागिरी दशैंको टिकाको दिन मात्रै बन्द भएको थियो । चन्द्रागिरीमा फुलपाति, महाअष्टमी, महानवामी र एकादशीको दिनमा कुल २० हजारले भ्रमण गरेका छन् । बिहिबार पनि ७ हजारभन्दा बढीले चन्द्रागिरी भ्रमण गरेको उनले बताइन् ।
दशैंको अवसरमा कोजाग्रत पूणिर्मासम्म विदा सदुपयोग गर्नेहरु अझै ठूलो संख्यामा पर्यटक त्यहाँ पुग्ने कम्पनीका विश्वास छ । चन्द्रागिरी रिफ्रेसमेन्टको उपयुक्त गन्तव्य भएकोले पनि त्यहाँ जानेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो ।
थानकोटबाट नौदेखि १४ मिनेटमा चन्द्रागिरीको चुचुरोमा पुगिने केबलकार यात्राको लागि ७ सय रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ ।
स्रोत : अनलाइन खबर
बडा दशै टिका को दिन काठमाण्डौ मा जे देखियो फोटो फिचर
आश्विन २५, २०७३- दशैं लागेपछि सुनसान देखिएको काठमाडौंको सडकमा भने मंगलबार चहल पहल देखिएको छ । सवारी साधनको सामान्य चाप छ । टीकाको दिन भएकाले बिहानैदेखि सर्वसाधारण मान्यजनकोमा ओहोर दोहर थालेपछि सडकमा चहलपहल बढेको देखिएको छ ।
लाखौं मानिस काठमाडौंबाट बाहिरिएका बेला काठमाडौं बेहुली अन्माएको घर जस्तै चकमन्न देखिएको बेला आज भने युवा, युवाती, बालबालिका, प्रौढ देखि वृद्ध वद्धा नै निधारमा रातो टिका लगाएर सडकमा ओहोर दोहर गरिरहँदा शहर रंगिन देखिएको छ । सबैलाई आफन्तजन र मान्यजनबाट टिका थाप्ने हतारो देखिएको छ । मोटरसाइकलमा ५/५ जनासम्म चढेर गन्तव्य तर्फ गइरहेको देखिएका छन् ।
हेर्नुस तस्विरमा मंगलबारको काठमाडौंको सडकको दृश्य…
साभार : कान्तिपुर
राजधानीका शक्तिपीठमा नातिसँगै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह (फोटोफिचर)
काठमाडौँ: वडादसैंको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजधानीका विभिन्न शक्तिपीठमा पुगेर पूजापाठ तथा दर्शन गरेका छन् ।
राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दर्शन र पूजापाठ गरेलगत्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राजधानीका शक्तिपीठमा पुगेका हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले छोरीहरुसँग नक्साल भगवती, मैतीदेवी, कालिकास्थान, भद्रकाली, सङ्कटा र नरदेवी दक्षिणकाली, गुह्येश्वरी, मैतीदेवी, कालिकास्थान, नक्साल भगवती, भद्रकाली, शोभा भगवती, सङ्कटालगायतका शक्तिपीठमा पुगेर पूजाअर्चन तथा दर्शन गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति जस्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नातिसँग राजधानीका सबै शक्तिपीठमा पुगेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सबै शक्तिपीठमा पूजाअर्चना र दर्शन गरेका छन्।
स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
दशैंलाई यसरी गिज्याउँदैछ काठमाडौं सहर (फोटो फिचर )
२३ काठमाडौं । शरद ऋतु लागेपछि हिलो र मैलो हट्छ भन्ने कवि लेखनाथ पौड्याल अहिलेसम्म बाँचेका भए पक्कै पनि उनले ऋतुविचारमा यस्तो लेख्ने थिएनन् होला । अलिकति पानी पर्नासाथ काठमाडौंको दशा कस्तो हुन्छ ? हामीले केही तस्वीरहरु देखाउने प्रयास गरेका छौंं ।
काठमाडौंका कतिपय सडक एवं गल्लीहरु राम्रा लुगा र जुत्ता लगाएर हिँड्ने अवस्थामा छैनन् ।
यहाँका बासिन्दाले गाउँ घरमा जस्तो दशैंका बेलामा आफ्नो घर अगाडिको बाटो सफा पर्ने वा झारहरु उखेल्ने चलन पनि छैन ।
राजधानीमा पक्कै पनि राज्य गैरजिम्मेवार र स्वार्थी छ, तर जनता पनि दशैंमा बाटो र सार्वजनिक स्थलहरु सफा गर्नुपर्छ भन्ने सामुहिकतामा खासै ध्यान दिँदैनन् । कतिपय मानिसहरु राज्यले कर्णालीलाई वा मधेसलाई वा गाँउवस्तीलाई हेरेन भनेर गुनासो गर्छन् । तर, एकपटक यी तस्वीरहरु हेर्नोस् त, राज्यले काठमाडौंलाई पनि हेरेको छैन ।
हामीले यो फोहोरकै वीचमा ‘हिलोमा कमल’ भनेजस्तो तलको एउटा तस्वीर पनि फेला पार्याैं, जहाँ बानेश्वर खरीबाेटका प्रहरीहरू स्थानीयबासीसँग मिलेर दशैंको अवसरमा सरसफाइ अभियान चलाउने तयारी गरिरहेका भेटिए ।
अन्तिममा याे अर्काे एउटा तस्वीर पनि । जसले गाउँको परम्परा र दशैंको विशेष झल्को गराउँछ । दशैंमा मार हान्नका लागि यसैगरी हतियारमा सान लगाउने प्रचलन छ नेपाली समाजमा । बानेश्वरमा भेटिएका यी दुर्इ शिल्पीहरू खसी काट्ने खुकुरी उध्याइरहेका छन् ।
हत्यालाई आत्माहत्या बनाउदै प्रहरी, इलका प्रहरी कार्यालय टिकापुरले ढाकछोप गर्दै किटानि जाहेर दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो (प्रमाण-तस्विर सहित)
टिकापुर १५ असोज । असोज ६ गते राति टिकापुर नगरपालिका वाडा ९ स्थित पुर्व प्रहरी जवान नविन सोडारीले मालिका विकास वैङक हालको महालक्ष्मी विकास वैङकको टिकापुर शाखामा कार्यरत्त आफ्नी श्रीमति खमा वोगटी (सोडारी) लाइ घरको झ्यालमा झुन्डीएको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरले जानकारी दिएको भएपनि मृतक वोगटीका माइति पक्षलाई कुनै खबर नगरी मृतक वोगटीको फोटोलाइ प्रमाण वनाइ माइति पक्षलाइ झुडिएको हो भन्दै विश्वास दिलाउने काम गरेको माइति पक्षको दावि रहेको छ ।
घटनाको स्थल र प्रकृति हेर्दा र सोडारीको परिवार र प्रहरीको कायैशैलि पछि माईति पक्षले मृतक वोगटीको आत्माहत्या नभइ कुटपिट गरि हत्या गरिएको मृतक वोगटीका भाइ खेम वोगटीले वताए ।
माइति पक्षले किटानि जाहेर दिन खोज्दा इलका प्रहरी कार्यालय टिकापुरले प्रथम चरणमा घटनालाई ढाकछोप गर्दै किटानि जाहेर दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि माइति पक्ष र स्थानिय महिला अगुवाइ र दवाव पछि असोज ७ गते साझ ६ वजे पछि मात्र इलका प्रहरी कार्यल टिकापुरले किटानि जाहेर दार्ता गरेका माइति पक्षको दावि रहेको छ ।
इलका प्रहरी कार्याल टिकापुरको मुचुल्का र टिकापुर अस्पतालको पोष्ट माटम रिपोट पनि एक आपासमा वाझिएपछि माईति पक्ष आक्रोश हुदै असोज ९ गते आईतवार टिकापुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मृतक वोगटीको हत्या नभई आत्माहत्या भएको भन्दै प्रहरी प्रशासनले प्रमाण जुटउन आफु लागी परेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा सप्रमाणहरुका साथ माइति पक्षले पत्रकार सम्मेलनमा प्रमाण सहित हत्यमा संलग रहका आरोपित सोडारीका दाइ भाउजुको पनि संलग्नता रहेको भन्दै किटानि जाहेरी दिदा पनि प्रहरी प्रशासनले सोडारीका दाजु भाउजुलाइ आफ्नो निगरानिमा नराखेको भन्दै प्रत्रकार सम्मेलनमा माइति पक्ष गुनासो राखेका थिए ।
यता नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायक निरीक्षक गौतम मिश्रका अनुसार हत्या अभियोगमा प्रकाउ परेका सोडारीलाई अहिले अनुसन्धान जारी रहेको र दशै लगतै अदालतमा पेश गर्ने भन्दै अहिले केहि भन्न नसकिने भन्दै पन्छीएका छन् ।
यस्ता छन् मृतक वोगटीको घटनास्थलमा देखिएका दृष्हरु :
भाचिएको खाट : नेपाल प्रहरीले घटना भएको कोठामा रहेको भाचिएको खाटलाइ आफु चड्दा खाट भाचिएको भन्दै ढाकछोप गरेको माइति पक्षको दावि ।
मृतक खमा वोगटीले लेखिएको हस्तालेखित निवेदन
सुसाइड पत्र : मृतक वोगटीलाइ जल्लाउदै गर्दा चिहान घाटमा पोष्टमटमको भोलि पल्ट टिकापुर दौलतघाटमा भेटिएको वनावटी सुसाइट नोट
माइति पक्ष र स्थानिय अगुवाइको दवाव पछि प्रहरीले दिइएको तस्विर : मृतक वोगटीको गालाको दाया साइटमा कालो रातो निलडाम र आँखामा कालो निलडाम देखिएको छ । यो घटनाको सवै भन्दा ठुलो कुटपिट पछिको हत्या र प्रहरीको संलग्नता रहेका माइति पक्षको दावि गर्ने प्रमाणका आधार सहितको तस्विर
माइतिपक्ष पुगेपछि मृतक वोगटीको तस्विर : माइतिपक्ष पुगेपछि मृतकको अवस्था देखिएको अवस्था हो जुन वास्तविक फोटो भन्दा र वनाउटी फोटो जस्तै रहेको छ पहिलेको फोटोमा रहेका रातो निलडाम भेटिदैन्
श्रोत स्वोतन्त्र खबर बाट
चीनले ब्रम्हपुत्रको सहायक नदी रोक्यो भारत मा पानि को संकट आउन सक्ने ..
एजेन्सी । चीनले तिब्बतमा जलविद्युत परियोजनाका लागि ब्रम्हपुत्रको सहायक नदीको पानी रोकिदिएको छ ।
चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार चीनले यो पानीबाट बिजुली निकाल्नुका साथै सिंचाईका लागि प्रयोग गर्नेछ । तर भारत र बंगलादेशका कयौं नागरिकमा पानीको आपूर्ती प्रभावित हुने भन्दै दुबै देश चिन्तित भएका छन् ।
पाकिस्तानमाथि भारतले बढाएको दबाबको विरोधमा चीनले यो कदम चालेको हुनसक्ने भारतीय संचारमाध्यमहरुले विश्लेषण गरेका छन् । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिन्धु जल सम्झौताको रिभ्यू गर्ने बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, रगत र पानी एकसाथ बग्न सक्दैन । भारतले सिन्धूको पानी रोके पाकिस्तान प्रभावित हुनेछ । यस्तैगरी चीनले आफ्नो भूभाग हुदैँ बग्ने नदी रोकेमा भारत तथा बंगलादेशका केही क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् ।
गिरान्चौरमा घर बनाएर बिदा भयो नेपाली सेना, धुर्मुसले यसरी विदाई गरे (फोटो फिचर)
काठमाडौं, १३ असोज । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिरहेको गिरान्चौर एकिकृत बस्तीमा श्रमदान गर्न आएको नेपाली सेनाको टोली बिदा भएको छ ।
नेपाली सेनाको टोलीले ५५ दिन बस्ती निर्माणमा श्रमदान गरेर आज बिदा भएको हो । सेनाको टोलीले श्रमदानका स्वरुप ६ वटा घर र एउटा सामुदायिक भवन निर्माण गरेको छ । नेपाली सेनाले श्रमदानका लागि २६ बाहिनी अड्डा अन्र्तगतको गोरखबहादुर गण चौतारा, विष्णुदल गण धुलीखेल, विरदल गण भक्तपुर र सत्रुभञ्जन गुल्म मेलम्चीका जवान खटाएको थियो ।
पूर्वनिर्धारित योजना अनुरुप समयमा नै आफ्नो काम सम्पन्न गरेर गिरान्चौरबाट बिदा भएको उपसेनानी अजयकुमार लिंगथेपले जानकारी दिएका छन् । ५५ दिनमा नेपाली सेनाका ५० जवान दैनिक रुपमा खटेर ६ वटा घर र एउटा सामुदायिक भवन निर्माण गरेका हुन् । नेपाली सेनाले बस्ती निर्माणमा गरेको श्रम सहयोगप्रति फाउण्डेशनले आभार व्यक्त गरेको छ ।
भूकम्प पीडितहरु छाप्रोमा बस्दै गर्दा एकिकृत बस्ती बनाउने हाम्रो आँटलाई पुरा गर्न नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाप्रति फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले खुशि व्यक्त गरेका छन् ।
‘सेनाको टोलीले ६ वटा घर र सामुदायिक भवन निर्माण गरिदिने वचन दिएको थियो, त्यो निर्धारीत समयमा नै पुरा भएको छ । अन्य बाँकी घर निर्माण पनि अन्तिम चरण पुगिसकेको छ,’ कट्टेलले भने ।
सैनिक श्रीमति संघले १४ लाख रुपैँया आर्थिक सहायता गर्नु र नेपाली सेनाले हामीले गरेको डिजाइन अनुसारका घर बनाएर सहयोग गर्नु गौरवको कुरा रहेको फाउण्डेशनकी कोषाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरेले बताएकी छन् ।
सेलिब्रेटी भन्दा बढी चर्चित चिनियाँ गाउँले युवती ( फोटो फिचर )
११ असोज, एजेन्सी ।
गाउँका युवती भन्नै वित्तिकै हाम्रो मनमा सिधा सादा युवतीको तस्विर आउँछ । गाउँले युवतीहरुको सुन्दरता उनीहरुको सादगीमा नै हुन्छ ।
गाउँले युवतीहरुलाई शहरी मोडलसँग तुलना गर्नु निरर्थक मानिन्छ । तर चीनको एक गाउँकी युवती भने यतिबेला सेलिब्रेटी मोडल भन्दा चर्चित बनेकी छन् ।
उनका तस्विर चिनियाँ सञ्चार माध्यम हुँदै संसारभरी भाइरल बनेका छन् । चीनको एक गाउँमा बस्ने बताइएकी यी युवती कुनै सुपर मोडल भन्दा कम छैनन् ।
चीनको एक गाउँमा बस्ने यी युवतीको विषयमा धेरै विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।